Vaovao - Inona ny fizotran'ny vokatra?
Inona ny fizotran'ny vokatra?
Workpiece → degreasing → fanasan-drano → pickling → fanasan-drano → asitrika ao amin'ny fanampiana plating solvent → fanamainana sy preheating → mafana-dip galvanizing → famaranana → mangatsiaka → passivation → kobanina → fanamainana → fisafoana
Ny fanadiovana simika na ny fanadiovana metaly miorina amin'ny rano dia azo ampiasaina amin'ny fanadiovana mandra-pahalatsahan'ny rano ny workpiece.
Azo alaina amin'ny H2SO4 15%, thiourea 0,1%, 40 ~ 60 ℃ na HCl 20%, hexamethylenetetramine 1 ~ 3g / L, 20 ~ 40 ℃. Ny fanampin'ny inhibitor corrosion dia afaka manakana ny matrix tsy hihoatra ny harafesina ary mampihena ny fidiran'ny hidrôzenina amin'ny matrix vy. Ny fitsaboana amin'ny degreasing sy ny fametahana ratsy dia hahatonga ny firaiketana ratsy amin'ny coating, tsy misy coating zinc na peeling ny sosona zinc.
Fantatra ihany koa amin'ny hoe mpandraharaha fatorana, afaka mitazona ilay asa ho mavitrika alohan'ny fandrobohana izy mba hanamafisana ny fifamatorana eo amin'ny sosona fametahana sy ny substrate. NH4Cl 15%～25%, ZnCl2 2.5%～3.5%, 55～65℃, 5～10min. Mba hampihenana ny volatilization NH4Cl dia azo ampiana glycerine araka ny tokony ho izy.
(4) Fanamainana sy fanamainana mialoha
Mba hisorohana ny workpiece tsy deforming noho ny maranitra fiakaran'ny mari-pana mandritra ny asitrika plating, ary mba hanesorana ny sisa hamandoana, mba hisorohana ny zinc fipoahana, ka niteraka ny zinc ranoka fipoahana, ny preheating amin'ny ankapobeny 120-180 ° C.
(5) Hot-dip galvanizing
Ilaina ny mifehy ny mari-pana amin'ny vahaolana zinc, ny fotoana fanondrahana ary ny hafainganam-pandehan'ny asa esorina amin'ny vahaolana zinc. Ny mari-pana dia ambany loatra, ny fluidity ny zinc ranon-javatra mahantra, ny coating dia matevina sy uneven, mora ny mamokatra sagging, ary ny bika aman'endriny ratsy; Ny mari-pana dia ambony, ny fluidity ny zinc ranon-javatra dia tsara, ny zinc ranon-javatra dia mora ny misaraka amin'ny workpiece, ary ny fisehoan-javatra ny sagging sy ny ketrona dia nihena. Mafy, manify coating, tsara tarehy, avo famokarana fahombiazana; na izany aza, raha ambony loatra ny mari-pana, dia ho simba be ny workpiece sy ny vilany fanitso, ary be dia be ny zinc tain-drongony vokarina, izay hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny fanitso sosona sy mandany be dia be ny zinc. Amin'io mari-pana io ihany, dia lava ny fotoana fametahana asitrika ary matevina ny sosona fametahana. Rehefa mitovy ny hateviny takiana amin'ny mari-pana samy hafa, dia mila fotoana ela ny mari-pana ambony asitrika plating. Mba hisorohana ny fiovaovan'ny hafanana amin'ny workpiece sy hampihenana ny tain-drongony vokatry ny fahaverezan'ny vy, ny mpanamboatra ankapobeny dia mampiasa 450 ~ 470 ℃, 0.5 ~ 1.5min. Ny orinasa sasany dia mampiasa mari-pana ambony kokoa ho an'ny workpieces lehibe sy ny fanariana vy, fa misoroka ny mari-pana amin'ny fatiantoka vy ambony indrindra. Mba hanatsarana ny fluidity ny mafana dip plating vahaolana amin'ny mari-pana ambany, misoroka ny coating ho matevina loatra, ary hanatsara ny endriky ny coating, 0,01% ny 0,02% ny aluminium madio dia matetika ampiana. Aluminum dia tokony ampiana kely imbetsaka.
Ny famitana ny workpiece aorian'ny fametahana dia ny fanesorana ny zinc sy ny zinc nodules ambonin'ny tany, na amin'ny alàlan'ny fanozongozonana na amin'ny fomba manual.
Ny tanjona dia ny hanatsarana ny fanoherana ny harafesina amin'ny atmosfera eo amin'ny tontolon'ny asa, hampihenana na hanalava ny endriky ny harafesina fotsy, ary hitazona ny endriky ny coating tsara. Izy rehetra dia mandalo amin'ny chromate, toy ny Na2Cr2O7 80～100g/L, asidra solifara 3～4ml/L.
Amin'ny ankapobeny dia mangatsiaka amin'ny rano izy io, saingy tsy tokony ho ambany loatra ny mari-pana mba hisakanana ny workpiece, indrindra ny fanariana, tsy hivaky ao amin'ny matrix noho ny fangatsiahana sy ny fihenan'ny.
Ny endriky ny coating dia mamirapiratra, amin'ny antsipiriany, tsy misy sagging na ketrona. Ny fanaraha-maso ny hateviny dia afaka mampiasa fandrefesana hatevin'ny coating, ny fomba dia tsotra. Ny hatevin'ny coating dia azo ihany koa amin'ny fanovana ny habetsaky ny zinc adhesion. Ny tanjaky ny fatorana dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny milina fanontam-pirinty, ary ny santionany dia tokony hiondrika amin'ny 90-180 °, ary tsy tokony hisy triatra na peeling ny coating. Azo andrana koa izy io amin’ny fikapohana amin’ny tantanana mavesatra.
2. Hot-dip galvanized sosona dingana fananganana ny mafana-dip galvanized sosona dingana fananganana dia ny dingan`ny mamorona vy-zinc firaka eo amin`ny vy matrix sy ny ivelany madio sosona zinc. Ny sosona firaka vy-zinc dia miforona eny ambonin'ny workpiece mandritra ny galvanizing mafana. Ny sosona vy sy ny zinc madio dia mitambatra tsara, ary ny dingana dia azo lazaina tsotra izao: rehefa natsofoka tamin'ny zinc natsofoka ny workpiece vy, dia miforona eo amin'ny interface ny vahaolana matanjaka amin'ny zinc sy alpha vy (fototra vatana). Izy io dia kristaly miforona amin'ny famongorana ny atôma zinc ao amin'ny vy metaly fototra amin'ny toe-javatra mafy. Mitambatra ireo atôma metaly roa, ary somary kely ny fifanintonana eo amin’ireo atoma. Noho izany, rehefa tonga saturation ny zinc ao amin'ny vahaolana mafy, ny atôma singa roa amin'ny zinc sy vy dia miparitaka, ary ny atoma zinc izay niparitaka (na niditra) tao amin'ny matrices vy dia mifindra monina ao amin'ny matrix matrix, ary mamorona firaka tsikelikely. vy, ary miparitaka Ny vy sy ny zinc ao amin'ny zinc voarendrika dia mamorona fitambarana intermetallic FeZn13, izay milentika ao amin'ny fanambanin'ny vilany misy galvanizing mafana, izay antsoina hoe tain'ny zinc. Rehefa nesorina tamin'ny vahaolana fanindronana zinc ny workpiece, dia misy sosona zinc madio miforona eo amin'ny tany, izay kristaly hexagonal. Ny votoatiny vy dia tsy mihoatra ny 0,003%.
Fahatelo, ny fiarovana fampisehoana ny mafana-dip galvanized sosona Ny hatevin'ny ny electro-galvanized sosona dia matetika 5-15μm, ary ny mafana-manatsoboka tafo sosona amin'ny ankapobeny mihoatra ny 65μm, na dia avo toy ny 100μm. Ny galvanizing mafana dia manana fandrakofana tsara, coating matevina ary tsy misy fampidirana organika. Araka ny fantatsika rehetra, ny mekanika anti-atmospheric corrosion ny zinc dia misy fiarovana mekanika sy fiarovana electrochemical. Eo ambanin'ny toetry ny harafesina amin'ny atmosfera, misy sarimihetsika fiarovana amin'ny ZnO, Zn (OH) 2 ary karibonetra zinc fototra eo ambonin'ny sosona zinc, izay mety hampiadana ny fihanaky ny zinc amin'ny lafiny iray. Ny sarimihetsika fiarovana (fantatra amin'ny anarana hoe harafesina fotsy) dia simba ary misy sarimihetsika vaovao miforona. Rehefa simba tanteraka ny sosona zinc ary tandindonin-doza ny matrix vy, dia hamokatra fiarovana electrochemical ho an'ny matrix ny zinc. Ny tanjaky ny zinc dia -0.76V, ary ny mety ho an'ny vy dia -0.44V. Rehefa mamorona bateria mikraoba ny zinc sy vy dia levona ho anode ny zinc. Arovana toy ny cathode izy io. Mazava ho azy fa ny galvanizing mafana dia manana fanoherana ny harafesina amin'ny atmosfera amin'ny vy metaly fototra noho ny electro-galvanizing.
Fahefatra, ny fifehezana ny fananganana lavenona zinc sy slag zinc mandritra ny galvanizing mafana
Ny lavenona zinc sy ny tain-drongony zinc dia tsy vitan'ny hoe misy fiantraikany lehibe amin'ny kalitaon'ny sosona asitrika zinc, fa mahatonga ny coating ho henjana sy hamokatra zinc nodules. Ankoatra izany, ny vidin'ny hot-dip galvanizing dia nitombo be. Amin'ny ankapobeny, ny fanjifana zinc dia 80-120kg isaky ny workpiece 1 taonina. Raha matotra ny lavenona zinc sy tain-drendrika, dia ho 140-200kg ny fanjifana zinc. Ny fifehezana ny karbaona zinc dia ny fifehezana ny mari-pana sy ny fampihenana ny scum vokarin'ny oxidation ny ranon-javatra zinc. Ny mpanamboatra an-trano sasany dia mampiasa fasika refractory, lavenona saribao, sns. Ny firenena vahiny dia mampiasa baolina seramika na vera miaraka amin'ny conductivity mafana mafana, avo lenta, ambany hery manokana, ary tsy misy fanehoan-kevitra amin'ny tsiranoka zinc, izay mety hampihena ny fahaverezan'ny hafanana ary hisorohana ny oxidation. Ity karazana baolina ity dia mora atosiky ny workpiece, ary tsy miraikitra amin'ny workpiece. Ny voka-dratsiny. Ho an'ny fananganana tain-drongony zinc amin'ny ranon-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-tsiran-d Ny votoatin'ny zinc ao amin'ny tain-drongony zinc dia mety hahatratra 95%, izay galvanizing mafana. Ny fanalahidin'ny vidin'ny zinc. Hita avy amin'ny curve solubility ny vy ao amin'ny zinc liquid fa ny habetsahan'ny vy levona, izany hoe ny habetsahan'ny vy very, dia samy hafa amin'ny hafanana sy ny fotoana fihazonana samy hafa. Amin'ny manodidina ny 500 ° C, ny fahaverezan'ny vy dia mitombo be miaraka amin'ny hafanana sy ny fihazonana ny fotoana, saika amin'ny fifandraisana tsipika. Eo ambanin'ny 480 ~ 510 ℃, ny fatiantoka vy dia mitombo tsikelikely rehefa mandeha ny fotoana. Noho izany, ny olona dia miantso ny 480 ~ 510 ℃ ny faritra famongorana ratsy. Amin'ity mari-pana ity, ny ranon-tsiran-tsiran-tsiranoka dia hanimba ny asa ary ny vilany fanindroany no tena lehibe indrindra. Ny fatiantoka vy dia hitombo be rehefa mihoatra ny 560 ℃ ny mari-pana, ary ny zinc dia handrava ny matrix vy rehefa mihoatra ny 660 ℃ ny mari-pana. . Noho izany, ny fametahana dia atao amin'ny faritra roa amin'ny 450-480 ° C sy 520-560 ° C.
5. Fanaraha-maso ny habetsaky ny tain-drongony zinc
Mba hampihenana ny tain'ny zinc dia ilaina ny mampihena ny votoatin'ny vy ao amin'ny vahaolana zinc, izay manomboka amin'ny fampihenana ny anton'ny famongorana vy:
⑴Ny fametahana sy ny fitehirizana hafanana dia tokony hialana amin'ny faritra faratampony amin'ny fandravana vy, izany hoe, tsy miasa amin'ny 480 ~ 510 ℃.
⑵ Arak'izay azo atao, ny fitaovana zinc vilany dia tokony welded amin'ny takelaka vy misy karbaona sy ambany silisiôma afa-po. Ny votoatin'ny karbaona avo lenta dia hanafaingana ny fihanaky ny vy amin'ny alàlan'ny tsiranoka zinc, ary ny votoatin'ny silisiôma avo dia afaka mampiroborobo ny fihanaky ny vy amin'ny alàlan'ny tsiranoka zinc. Amin'izao fotoana izao, takelaka vy karbaona avo lenta 08F no tena ampiasaina. Ny votoatin'ny karbaona dia 0,087% (0,05%～0,11%), ny votoatin'ny silisiôma dia ≤0,03%, ary misy singa toy ny nikela sy chromium izay afaka manakana ny vy tsy ho harafesina. Aza mampiasa vy karbaona tsotra, raha tsy izany dia ho lehibe ny fanjifana zinc ary ho fohy ny fiainan'ny vilany zinc. Natolotra ihany koa ny hampiasana karbida silisiôma mba hanaovana tanky mpandrendrika zinc, na dia afaka mamaha ny fatiantoka vy aza izany, fa olana ihany koa ny fizotran'ny modely.
⑶Esorina matetika. Ny mari-pana aloha dia atsangana ho any amin'ny fetra ambony amin'ny mari-pana amin'ny dingana mba hanasarahana ny zinc slag amin'ny zinc fluid, ary avy eo ampidinina ho eo ambanin'ny mari-pana amin'ny dingana, ka ny zinc slag dia milentika any amin'ny faran'ny tank ary avy eo dia alaina miaraka amin'ny sotro iray. Tokony hovonjena ara-potoana ihany koa ireo faritra voapetaka izay latsaka ao anaty ranon-drongony.
⑷Ilaina ny misoroka ny vy ao amin'ny plating agent tsy ho entina ao anaty tanky zinc miaraka amin'ny workpiece. Hiforona ilay fitambarana misy vy mivolontsôkôlà mena mena rehefa ampiasaina mandritra ny fe-potoana iray ilay fitaovana fanasan-damba, ary tsy maintsy voasivana tsy tapaka. Tsara kokoa ny mitazona ny sandan'ny pH an'ny mpandraharaha plating manodidina ny 5.
⑸ Latsaky ny 0,01% aluminium ao amin'ny vahaolana plating no hanafaingana ny fananganana ny tain-drendrika. Ny habetsahan'ny aluminium mety dia tsy vitan'ny hoe manatsara ny fluidité ny vahaolana zinc ary mampitombo ny famirapiratry ny coating, fa manampy amin'ny fampihenana ny zinc dross sy ny vovoka zinc. Ny aluminium kely mitsingevana amin'ny ranon-javatra dia mahasoa amin'ny fampihenana ny oxidation, ary misy fiantraikany be loatra amin'ny kalitaon'ny coating, ka miteraka lesoka.
⑹ Tokony hitovy ny hafanana sy ny fanafana mba hisorohana ny fipoahana sy ny hafanana tafahoatra eo an-toerana.
Fotoana fandefasana: Sep-30-2021